Qokelela imizuzu, UBATUBA "iparadesi" ilapha.
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAgnaldo
Phumla nalo lonke usapho kunye nabahlobo kule ndawo yokuhlala inoxolo nepholileyo, iimitha ezili-1500 ukusuka elunxwemeni lwaseMaranduba kunye nolunye ulwandle olungaphazamisiyo, oluzolileyo nolumnandi, olukwakufutshane neengxangxasi, iindlela kunye neendawo ezinembali.
Ubatuba, iparadesi ilapha!
Iibhedi ezitofotofo, kukho amagumbi amabini okulala, omabini anebhedi ephindwe kabini kunye nebhedi enye, kunye nebhedi ehoywayo yesofa kwigumbi lokuhlala. Indawo enomoya enabalandeli kuwo omabini amagumbi okulala kunye negumbi lokuhlala.
Ikhitshi eligcweleyo, ibarbecue yabucala kunye nebhafu yokuhlamba impahla.
Asinikezeli ngelinen yokulala, iitawuli kunye nemiqamelo.
I-Apartment 08 ibekwe kwindawo ezolileyo kakhulu, phakathi kweepropathi zabahlali bendawo kunye nabakhenkethi, kufutshane kakhulu nevenkile enkulu enevenkile yokubhaka kunye nebhula, indawo yokutyela, ipizzeria, ihamburger kunye namanye amashishini amaninzi.
Umbuki zindwendwe ngu- Agnaldo
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Sertão da Quina